समय र परिश्रम | Nepali Christians
समय र परिश्रम
November 10, 2014 12:33 pm by: Nepali Christians Category: Articles A+ / A-
समयको महत्व कति छ भनेर सायद मैले भनिरहनु नपर्ला । समय एकदमै शक्तिशाली हुन्छ । समय कहिल्यै रोकिदैन । आफ्नै गतिमा आफ्नै सुरमा यो एकोहोरो चलिरहन्छ । जसले समयलाई चिन्न सक्दैन, जो समय संग चल्न जान्दैन त्यो छोडिन्छ । एक चोटी बितेको समय फरि फर्कदैन । हरेक एक मिनेटको महत्व हुन्छ । जब सम्म हामी समय संग चल्न सक्दैनौ तब सम्म हामी जहिले पनि अरु भन्दा पछि हुन्छौ। समय अनुसार चल्नु भन्न खोजेको समयमा नै केहि गर्न‘ुपर्दछ भन्नु हो । अरुले धान रोप्ने बेलामा सुतेर बस्ने अनि धान काट्ने, समयमा पछुताएर हुदैन । समय छदै जसले कडा परिश्रम गर्छ उसले पक्कै पनि जीवनमा सफलता पाउछ । समयलाई बुझ्न नसकेर आज धेरै मानिसहरु पछुताई रहेका छन् भने कति भविष्यमा पछुताउने छन् । कसैले यसरी भनेका छन् : ‘आजै गर्न सक्ने कामलाई भोलीको लागि नसााच । भोली गर्छु भोली गर्छु भन्दा भन्दै बर्षौ विति जान्छ । अनि सााचेर राखेको काम गर्न खोज्दा नयाा मौका नयाा काम हात बाट उम्कन्छ’ बर्ष भरि हल्लेर हिड्यो, परीक्षा दिने बेला पाठ पढि सिढ्याउनै हतार भने जस्तै हुन्छ समयमा गर्नुपर्ने काम समयमै नगर्दा । जुन काम जुन समयमा गर्ने हो त्यहि समयमा नै गरिसक्नु पर्छ । मैले क्ीऋ दिएर फुर्सद भएको त्यो तीन महिनामा यदि कम्प्युटर सिकेको भए सायद ंद्द सकेर फुर्सद भएको पााच महिनामा मैले अरुनै केहि कुरा सिक्न पाउथे अथवा कुनै काम गनै पाउथे । आज नै सिक्नु पर्ने सिपहरु अनि आज नै गर्नुपर्ने कामहरु कतै भोलीको लागि सााचिरहनु भएको त छैन ? विचार गर्नुहोस् ।
बर्षमा ३६५ दिन हुन्छ । महिनामा ३० दिन, हप्तामा ७ दिन अनि दिनको २४ घण्टा हुन्छ। यो समय सबै देशमा अनि सबैको लागि बराबर हो । सबैको लागि बराबर समय भएर पनि किन कोहि देश विकासको अग्रपंक्तिमा त कोहि पुछारमा, किन कोही व्यक्ति सफलताको शिखरमा त कोही सफलताको फेदमा हुन्छन् । समय अनुसार चल्न नजानेर नै हो । एउटी अमेरिकन दिदीले मलाई आफ्नो मबष्थि कअजभमगभि पठाउनु भएको थियो । उहाा प्रत्येक दिन बिहान द्धस्घण् बm मा उठ्नु हुन्छ र परिवारको लागि खाना बनाउनु हुन्छ । ठस्घण्बm मा अफिस जानु हुन्छ र दिनभर आफ्ने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनि बेलुका छस्घण्ऊ मा आफ्नो श्रीमान संगै घर फर्कनु हुन्छ । घरमा सबैको लागि खाना तयार गर्नु हुन्छ । यसरी उहााको दिन सकिन्छ र सधै यहि कअजभमगभि दोहोरीन्छ । सााच्चै विदेशीहरु साहृै व्यस्त हुन्छन् । एक छिन फुर्सद हुदैन । सायद यसै कारणले उनिहरुको देश बिकासको क्रममा धेरै अघि पुगेको पो हो की?
एकचोटी एउटा व्बउबलभकभ ले नेपाली युवाहरु फुर्सदिलो भएर खेलीरहेको, बसिरहेको देखेर नेपालीहरुको जीवन साहृै सुखी रैछ काम नै गर्नु नपर्ने भन्दै गुनासो गर्दैथ्यो रे कुन्नी कता हो । साच्चै नेपाली (हामी) हरु साहृै फुर्सदिलो हुन्छौ । तर यो पनि सााचो हो कि हामीलाई व्यस्त हुन काम पनि छैन । भर्खरै कोरिया गएको एउटा दाईले कोरियामा जसरी काम गर्ने हो भने नेपालको हरेक बगरमा स्याउ फल्छ भनेर लेखेको ाबअभदययप कतबतगक पढे, खोई उहााले किन त्यसो भन्नु भो । पोखरामा मैले व्यक्तिगत रुपमा दुई जना दाइहरु भेटेको छु जो हरु आफ्नो काममा साहृै व्यस्त छन् । दुई भन्दा बढि कामहरु सम्हालेका ती दाइहरुको जीवन बाट म पनि उत्साहित भएा । धेरै मेहनत गर्नु हुने, त्यसै हल्लेर नहिड्ने अनि आम्दानी पनि राम्रो गरेको देखो। अब म पनि व्यस्त हुन्छु मेहनत गर्छु भन्ने प्रयास गरे । मेहनतका साथ धेरै काम गर्छु अनि थोरै सुत्छु भने तर म संग व्यस्त रहनको लागि वाइबल पढ्ने, पुस्तक पढ्ने र कोठा सफा गर्ने बाहेक अरु आम्दानि हुने र व्यक्तित्व विकाश हुने काम नै थिएन् । (सधै गरिरहने मेरो आफ्नो सेवकाई त छदै छ) मैले चिनेको त्यो दुई जना दाईहरु मेहनत गर्नु हुन्थो र व्यस्त रहनु हुन्थो र त्यस बाट उहााहरुको आम्दानि पनि बढ्थ्यो ।
मैले भन्न खोजेको कुनै सिप र ज्ञान विनाको मेहनत र व्यस्तता बेकार हुन्छ खाली कसरत गरेको जस्तो मात्रै । त्यसैले मेहनत गर्नको लागि आफु संग केहि सिप वा ज्ञान पनि भाएको हुनुपर्छ । प्राय: नेपाली युवाहरु सुतेर, डुलेर, समय बर्बाद गरेको मैले देखेको छु । यो व्यस्त हुनु पर्छ मेहनत गर्नु पर्छ भन्ने नबुझेर होईन तर प्रसस्त ज्ञान र सिप नभएर हो भने धेरै जना अवसर नपाएर पनि त्यसै समय बिताई रहनु परेको छ । कुनै मार्केटिङको व्यवसाय गर्न, गाडिको खलासि बस्न, र कुनै ज्यामि काम गर्न कुनै सिप र ज्ञान नभए पनि हुन्छ तर यसै बाट जीन्दगी राम्रो संग नबित्न सक्छ । त्यसैले समय छदै प्रसस्तै ज्ञान बटुलौ, सिप सिकौ अनि त्यहि सिप र ज्ञान अनुसार मेहनत गरौ । तपाईको उन्नति अवश्य हुनेछ साथै यदि हामी सबैले समयको महत्व बुझेर समयको पुरा सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो देश पनि अवस्य विकाशको गतिमा अघि बड्नेछ ।
लेखक – जेम्स तामाङ्ग
टाईपिङ – राजु तामाङ्ग
समय र परिश्रम Reviewed by Nepali Christians on Nov 10 . [caption id="attachment_812" align="alignright" width="200" class=" "] James Tamang[/caption] समयको महत्व कति छ भनेर सायद मैले भनिरहनु नपर्ला । समय एकदमै शक्तिश [caption id="attachment_812" align="alignright" width="200" class=" "] James Tamang[/caption] समयको महत्व कति छ भनेर सायद मैले भनिरहनु नपर्ला । समय एकदमै शक्तिश Rating: 0
निराहार” माने उपवास ।...संसारको जालोले झेलिएको आत्मीकी फल ।...